Mgbatị na Ọzụzụ - Vondt.net
Ebe maka akwukwo: Ihe omume na nkuzi
4 Ihe Omume Na-emegide Mgbu Ọrịa
30 / 11 / 2016 /0 Comments/i Mmega Ahụ na Mmega Ahụ /av ewute
Ị na -arịa osteomyelitis na ike gwụrụ gị nke ukwuu? Nke a bụ ezigbo mmega ahụ 4 nwere ike iwusi akwara aka nri ike ma nyere gị aka igbochi osteomyelitis.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ gbasara mmega ahụ, nhọrọ ọgwụgwọ ma ọ bụ ọzụzụ, a na -anabata gị ịkpọtụrụ anyị Facebook ma ọ bụ Ọwa YouTube anyị.
Osteomyelitis na -abụkarị nke na -eme ugboro ugboro na -enweghị ezi usoro
Banyela na mmalite nke ịgba ọsọ nke ọma, mana ọ na-eme happens ọzọ. Osteomyelitis na ọzọ. Nchọpụta ole na ole na -ebute oke iwe na nkụda mmụọ dịka osteomyelitis na -eme ugboro ugboro. Akpụkpọ ọkpụkpụ na -anọdụ n'etiti ọkpụkpụ nku abụọ na ụkwụ ala; tibia (tibia ime) na fibula (mpụga tibia). Ịbubiga ibu ókè ma ọ bụ itinye na -ezighi ezi nwere ike ibute mmeghachi omume mkpali na anụ ahụ, nke na -amụpụtaghachi ihe mgbu mgbe ọ na -emesi ike n'ụkwụ na nkwonkwo ụkwụ ike.
N'isiokwu a, ị ga -amụtakwu ihe, n'etiti ihe ndị ọzọ:
1. Gini mere ị na -enweta osteomyelitis?
2. Kedu ihe na -ebute osteomyelitis ugboro ugboro?
3. Ihe ndị dị ize ndụ maka Osteomyelitis
4. Mmega ahụ na Ọzụzụ megide Osteomyelitis
5. Ọgwụgwọ na Mmeso Onwe Onye megide Osteomyelitis
Ị maara onye ọ bụla na -ata ahụhụ nke ukwuu na osteomyelitis? Enwere onwe gị ịkọrọ ha akụkọ ahụ.
Pịa bọtịnụ dị n'okpuru iji kesaa akụkọ ahụ na mgbasa ozi mmekọrịta - ọ bụrụ na achọrọ.
Na-eche ihe ma ọ bụ ka ịchọrọ karịa nke ndị ọkachamara na ndị ọkachamara? Soro anyị na Facebook Facebook anyị «Vondt.net - Anyị na-ebelata ihe mgbu gị»Ma ọ bụ Ọwa Youtube anyị (mepere na njikọ ọhụrụ) maka mmelite ahụike kwa ụbọchị yana mmemme mmega ahụ n'efu.
N'isiokwu a, anyị ga-elekwasị anya na iwusi musculature ike nke nwere ike belata ma belata nsogbu mmetụta na mpaghara a - enwere ike ime nke a, n'etiti ihe ndị ọzọ, site na mee ka akwara sikwuo ike, akwara ndị na-eto eto na ọbụ ụkwụ. Enwere ike ịkpọtụrụ anyị site na peeji Facebook anyị ma ọ bụrụ na i nwere kwuru, ndenye ma ọ bụ ajụjụ.
1. Gịnị kpatara ị na -enweta Osteomyelitis?
Ọrịa osteoarthritis na mgbu na retina bụ n'ihi mkpọchi anụ ahụ dị nro nke na-arapara n'ahụ uru ahụ na uru ahụ. Nke ahụ bụ, ibu karịrị ike nke gị - a na -emepụta anụ ahụ mebiri emebi karịa anụ ahụ nkịtị na mpaghara emetụtara. Ahụ anụ ahụ adịghịzi arụzi anụ ahụ (dịka esi gosipụta ebe a) yana ọ nwere ike bụrụ ihe ga - enyere onye ọzọ aka anụ ahụ.
Mgbakọ a na - eme ka mọzụlụ jupụta ma tinye nrụgide na tibia - nke n'aka ya na -ebute ma mgbu, mbufụt na mbufụt. Ngụkọta oge a dị nnọọ mfe. Ị ga -enwerịrị ike gị, yana ịgwọ ọrịa, ka ị gafere ibu ị na -ekpughere maka ọkpụkpụ ọkpụkpụ. N'ụzọ dị otu a, ha ga -enwe ike rụzie onwe ha n'etiti mgbatị ahụ ma ị ga -enwe ike ịlaghachi n'ọ joyụ nke ịgba ọsọ na ịga ogologo ije ọzọ. Na ngalaba na -esote, anyị ga -ekwukwu gbasara ihe egwu, ihe kpatara ya na ihe ndị ọzọ ị kwesịrị ịma.
2. Osteomyelitis na -emegharị ugboro ugboro = Ọtụtụ mgbe adịghị arụ ọrụ nke akwara na akwara aka
Eziokwu siri ike bụ na ike adịghị gị ịnagide oke nrụgide ị na -eme. Otu ihe kpatara ya bụ na ị mụbala ọzụzụ ọzụzụ ngwa ngwa. Ọ naghị atọ ụtọ ịnụ, mana ọ bụ otu a ka ọ dị. Mana ọ dị mma ịnụ, na ị nwere ike ịme ihe gbasara nke a site n'ịza ihe ndị a.
- Nrụpụta Anatomical nke na -enyere Membranes ọnụ aka
Ọkpụkpụ ọkpụkpụ na -adabere n'ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ iji belata ha ma belata ibu ujo. N'ihe banyere adịghị ike ahụ ike na ihe na-adọrọ adọrọ, anyị nwere ike ibufe - nsonaazụ ya bụ om osteomyelitis. A na-ahụ akwara kachasị mkpa nke na-enyere ụmị ọkpụkpụ aka na:
N'ihi ya, ị dabere na ọrụ, mgbanwe na ike na ihe owuwu ndị a ka ị nwee ike belata akpụkpọ ahụ ọkpụkpụ. Ịbawanye ike na ike n'ime otu anụ ahụ akpọrọ aha nwekwara nnukwu uru na ha nwere ike igbochi nsogbu ikpere na mmerụ egwuregwu ndị ọzọ. Marakwa na anyị na -ekwu maka mgbanwe - ya bụ nsonaazụ mmegharị nke ọma. Otu hip siri ike, nkwonkwo ụkwụ ma ọ bụ azụ enweghi mgbanwe ma obu nkpoghari dika uzo nke nwere mmeghari ya. Nke a bụ ihe kpatara ya na osteomyelitis na-emetụtakwa ọbụna ndị siri ike - ha enweghị agagharị zuru ezu iji nagide ibu ọrụ dị egwu.
3. Ihe Na -ebute Egwu: Mụta adịghị ike gị
Ka anyị kwuo eziokwu. Ọtụtụ n'ime anyị maara ụfọdụ adịghị ike anyị - na nke a bụ ebe ị kwesịrị ịmalite. Ọ bụrụ na ị nwere akwara ukwu ma ọ bụ akwara isi na -esighi ike mgbe ahụ ị nwere amamihe ịzụ ndị a. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ị maara na ị nọ na - agagharị dị ka apata nke ala azụ mgbe ahụ nke a kwesịrị ịbụ isi ihe ị ga-elekwasị anya.
Ihe ndị ọzọ ị kwesịrị izere n’oge ọzụzụ bụ:
Ejikwala ọsọ ọsọ n’elu mkpọda.
Ejila akpụkpọ ụkwụ eyi agba ọsọ, n'ihi na ndị a nwere nkwudo adịghị mma.
Zere ịgba ọsọ nke ukwuu na korota na ihe ndị yiri ya.
Zere egwuregwu ndị gụnyere ọtụtụ "mmalite na ịkwụsị".
Ndị mmadụ nwere ụkwụ dị larịị na ebe akwụkwụ na-agbakarị n'ọrịa meningitis. Ọ bụrụ na ụkwụ gị dị larịị ma ọ bụ arches siri ike na -emetụta gị, ị kwesịrị ị na -etinyekwu anya na akpụkpọ ụkwụ dị mma nwere mgbatị ahụ, sọks mkpakọ maka ịgba ọsọ (lee ihe atụ ebe a - njikọ ahụ ga -emepe na mpio dị iche), yana ntule nke insoles (nyocha egosila na ụdị dị ọnụ ala karịa na -arụkwa ọrụ dị oke ọnụ, yabụ ekwela ka a ghọgbuo gị). Chetakwa iwepụta oge zuru oke maka mgbake n'etiti nnọkọ - kedu maka nnọkọ igwu mmiri n'etiti ọsọ? Ndị ọzọ na -ejikwa sọks mkpakọ, dị ka nke anyị kwuru n'elu, iji kpalie mgbasawanye n'ụkwụ na n'ụkwụ mgbe izu ike. Nnyocha egosila na sọks dịka ndị a nwere ike belata mmiri na -enweghị isi na mmeghachi omume mkpali (edema), yana kwalite mgbake ngwa ngwa.
Yabụ na oge erugo iji gafee ihe omume anọ anyi kwere gị nkwa. Anyị lekwasịrị anya na mmemme ọzụzụ lekwasịrị anya nke nwere mmega ahụ anọ. N'oge na -adịbeghị anya, anyị emekwara vidiyo mmega ahụ megide osteomyelitis nke nwere mmega ahụ ise - yana vidiyo n'okpuru nkọwa mmega ahụ anọ a.
1. Liftkwụ n'apata ụkwụ (iji ma ọ bụ na-enweghị mgbatị ahụ)
Dịka anyị kwuru na mbido, nkwụsi ike n'ihe hip bụ igodo ma ọ bụrụ na adị n’ọkpụkpụ ahụ dị mma ma dịkwa mma n’ụkwụ. Nke a bụ n'ihi na akwara azụ nwere oke akụkụ nke ọrụ ma a bịa n'ị emetụta ibu mgbe anyị na-eje ije ma na-agba ọsọ.
N’aka ozo, hip siri ike nwere ike bụrụ ihe mgbochi na ọnya afọ na mkpọchi. Nke a bụ otu esi eme mmega ahụ: Dina ala n'akụkụ aka gị n'ihu gị na isi izu ike.
Ekem emenede ikpat ukot ke nnennen adausụn̄ (nnyanyan̄) efep ke ukot eken - nke a na - eduga n'ịzụzụ dị mma nke oche dị omimi na akwara hip. Tinyegharịa mmega ahụ 10-15 ugboro ugboro ihe karịrị 3 setịpụrụ - n'akụkụ abụọ.
2. Mkpịsị ụkwụ aka
Mkpịsị ụkwụ bụ mmega ahụ dị oke mkpa maka ndị na-achọ ịgba ọsọ ma ọ bụ ịgba ọsọ - otu n’ime mmemme ndị kachasị mkpa ma a bịa n’igbochi ọrịa ogbu na nkwonkwo nke osteomyelitis / iyatesịt - ma ọ bụ gị nke chọrọ ijegharị n’ụkwụ gị n’enweghị ọrịa.
Ya mere, ọ bụ n'ezie otu n'ime mmega ahụ kachasị mma ị nwere ike ịme ma ọ bụrụ na ịchọrọ igbochi nsogbu ụkwụ, nkwonkwo ụkwụ, ụkwụ na ikpere. Bido ugbua taa.
Ọnọdụ A: Bido jiri ụkwụ gị na-anọpụ iche.
Ọnọdụ B: Jiri nwayọ bulie mkpịsị ụkwụ gị - ka ị na-agbada na bọtịnụ ụkwụ.
- Mee 10 ugboro ugboro n'elu Ihe ato ato, ya bu 3 x 3.
3. "Nnukwu anụ ije" na-agbanwe
Otu n'ime ihe omume kachasị amasị anyị, n'ihi na ọ bụghị naanị na-arụ ọrụ maka ụkwụ gị kamakwa ọ bụ mmega ahụ dị mma maka ikpere, hips na pelvis. Mgbe obere oge gachara mmega ahụ ị ga - eche na ọ na - ere ọkụ n'ime akwara oche, ma n'ụzọ dị mma.
Chọta otu nkuzi (ọkacha mma maka ụdị mgbatị ahụ - nke nwere ike kegide ya na nkwonkwo ụkwụ abụọ ya dị ka na gburugburu.
Wee guzo n'ụkwụ gị ubu obosara iche ka e nwee ezigbo nguzogide site na eriri ruo n'ikpere ụkwụ gị. Gaanụ, mgbe ị na-arụ ọrụ iji mee ka ụkwụ gị sakwuo mbara, dị ka Frankenstein ma ọ bụ nne, ya mere aha ya. Emere ihe omume a 30-60 sekọnd n'elu 2-3 awa.
4. "Mkpịsị ụkwụ na-egbu mgbu"
Ezigbo mmega ahụ na - eme ka agụba na akwara ụkwụ dị ike nke ọma. Dịka e kwuru na mbụ, akwara ụkwụ gị bụ ihe nchebe mbụ gị ma a bịa n'ịgba ọsọ na ịkwado ụkwụ. Ike mọzụlụ nwere ike n’ụkwụ gị nwere ike ọghe, mmerụ ahụ na ịba ụba karịa.
Nọdụ ala oche ma tinye obere nhicha n’elu ala n’ihu gị
Debe bọlbụ ihu ụkwụ dị na mmalite mmalite nke akwa nhicha ahụ dị gị nso
Sie mkpịsị ụkwụ gị jiri aka gị were mkpịsị ụkwụ gị ka ị na-adọtara ya n’ebe ị na - agbatị ụkwụ gị n’okpuru ụkwụ gị.
Jide akwa nhicha ihe maka 1 sekọnd tupu ịhapụ ya
Hapụ ma kwughachi - ruo mgbe ị ruru n’akụkụ nke ọzọ nke nhicha ahụ
N'aka ozo i nwere ike ime 10 ugboro ugboro ugboro 3 emere - ọkacha mma kwa ụbọchị maka kacha mma mmetụta.
VIDIO: Ihe omume 5 na-emegide Meningitis
VIDIO: Mgbatị Ike 10 Na-emegide Hips Na-egbu mgbu
A sị ka e kwuwe, anyị ekwuputala ịdị mkpa nke hip na-arụ ọrụ ma sie ike, yabụ lee ihe omume hip iri maka ndị maara na nke a bụ otu adịghị ike gị. Enwere ike ime ihe ndị a ihe ruru ugboro anọ n'izu ma dabara maka mmadụ niile. Mana cheta na ọ bụ ịga n'ihu ka oge na -aga dị mkpa ma a bịa n'ịzụ ọzụzụ.
Sonyere ezinụlọ anyị! Enwere onwe gị ịdenye aha na ọwa n'efu maka mmemme mmega ahụ yana mmelite ahụike ozi.
Ọgwụgwọ na usoro nke onwe megide Osteomyelitis
Ọgwụgwọ Ọkpụkpụ Ụkwụ Kachasịrị Ụkwụ
Nrụgide nrụgide nrụgide megide periosteum
Ezi nha onwe gị gụnyere sọks mkpakọ na bọọlụ ịhịa aka n'ahụ
N'ime ọgwụgwọ osteomyelitis, dọkịta ga -enyocha ọrụ ụkwụ, ụkwụ na nkwonkwo ụkwụ. Ọtụtụ mgbe, nyocha arụrụ ọrụ ga -ekpughe oke ahụ ike na ụkwụ na ụkwụ. Ihe abụọ a nwere ike inye aka na osteomyelitis ozugbo, ebe ha na -emetụta nnabata ukwu na ụkwụ. Na mgbakwunye na nke a, akwara nwa ehi siri ike ma sie ike nwere ike imetụta ngagharị ihu ụkwụ. Ụkwụ nkwonkwo ụkwụ adịghịkwa aba uru ma a bịa n'ịgba ọsọ na ibu ibu. Ọkpụkpụ na azụ na -arụkwa ọrụ dị mkpa mgbe ị na -agba ọsọ - yabụ ihe ndị a dịkwa mkpa ka enyocha gị. Site n'iji acupuncture egwuregwu, ọrụ akwara, mkpokọta nkwonkwo ụkwụ na hip, ma ọ bụ ọgwụgwọ ebili mmiri, ihe ndị a nwere ike weghachite ọrụ nkịtị.
Usoro ọgwụgwọ ọ bụla ga -adịgasị iche dabere na onye ọrịa, mana a na -ejikarị acupuncture na ọgwụgwọ ebili mmiri maka osteomyelitis. Usoro ọgwụgwọ ndị a na -abụkarị nke physiotherapist ma ọ bụ chiropractor nke oge a. Ọmụmụ nyocha, gụnyere nke edepụtara n'akwụkwọ akụkọ ahụike Akwụkwọ akụkọ American Journal of Sports Medicine, egosila na ọgwụgwọ ebili mmiri nwere mmetụta edepụtara nke ọma megide osteomyelitis (1). Onye ọ bụla ngalaba ụlọọgwụ anyị nke Vondtklinikkene nwere akụrụngwa ebili mmiri nke ọgbara ọhụrụ, yana nka na acupuncture egwuregwu.
Ime Ihe Onwe Onye: Gịnị ka m nwere ike ime onwe m megide Osteomyelitis?
Ịmara na inwe ezigbo njiri onwe onye bụ uru mgbe niile. Mgbe anyị na-atụ aro nha onwe onye, ​​anyị na-enwekarị nchegbu maka usoro enwere ike iji ya oge niile na-enyere aka idozi ihe kpatara nsogbu ahụ. Ya mere, ndụmọdụ anyị atọ ebe a gụnyere ma mgbochi ma ọgwụgwọ.
Ntụle Mba 1: Mkpakọ sọks maka ụkwụ na ụkwụ
Nzọụkwụ dị mfe na nke kacha nta na-eme ka ahụ ike na ụkwụ ka mma. Yiri sọks mkpakọ mgbe ọ na -agba ọsọ, kamakwa mgbe ọ na -ezu ike, nwere ike ịnye ọtụtụ uru. Anyị maara, n'etiti ihe ndị ọzọ, na ọ na -enye mmụba ọbara, yana mgbake ngwa ngwa. Otu uru dị n'ịgba ọsọ bụ na ọ nwere ike nyere aka gbochie nrụpụta lactic acid n'ime mọzụlụ. Mkpakọ sọks (njikọ ahụ ga -emepe na windo ọhụrụ) ya mere ọ bụ ihe anyị na -akwadokarị maka ndị ọrịa nwere nsogbu ụkwụ - gụnyere osteomyelitis.
Ntụle Mba 2: Ịkpalite ebe bọọlụ
Enwere ike iji bọọlụ ịhịa aka mee ka mgbasa banye n'ime akwara nwa ehi ike gwụrụ. Ha zuru oke maka iji ya mee ihe n'okpuru ala ụkwụ - ọ nwere ike inye aka nye fascia plantar na -adịchaghị ala (efere akwara n'okpuru ụkwụ). Wdg setịpụrụ zuru oke na bọọlụ ịhịa aka dị iche iche (lee atụ ebe a - njikọ ga -emepe na mpio ọhụrụ) nwere ike ime ka ọ dị mfe iji ha na oke akwara anụ ahụ. Jiri ha kwa ụbọchị megide ụkwụ na ụkwụ abụọ - ikekwe na hip na oche. N'ụzọ dị otu a, akwara nwere oge iji gbakee n'etiti nnọkọ.
Ntụle Mba 3: Ọzụzụ na Miniband
Obere eriri bụ ezigbo ọzụzụ na -agbanwe maka gị ndị chọrọ ịzụ hips, azụ na pelvis gị n'ụzọ dị nchebe. Ọzụzụ na -agbanwe nwere ike inyere gị aka ikewa ahụ ike n'ụzọ dị irè ma dị nwayọ. Dịka ị na -ahụ, anyị na -ejikwa ihe ndị a n'ime mmemme abụọ akwadoro na mmemme ọzụzụ anyị. Nke a nwere ike inye aka na nsonaazụ kacha mma na ọzụzụ gị. Anyị ji ọlyụ na -akwado obere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ (ọkara) ndị na -azụtabeghị ihe nke ukwuu na -agbanwe. Mgbe ahụ ị nwere ike kama ịga n'ihu na-acha anụnụ anụnụ (ọkara-ike) n'ikpeazụ. Bipute ya ka ịhụ ihe atụ wee gụkwuo gbasara minibars (njikọ ahụ ga -emepe na mpio ọhụrụ).
Ị ma onye ọ bụla na -arịa Osteomyelitis? Enwere onwe gị ịkọrọ ha akụkọ ahụ.
Ịchọrọ ndụmọdụ ma ọ bụ ị nwere ajụjụ?
Alala azụ ịkpọtụrụ anyị na YouTube ma ọ bụ Facebook ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ gbasara osteomyelitis. Ị nwekwara ike ịhụ nchịkọta nke ụlọọgwụ anyị site na njikọ ebe a ọ bụrụ na ịchọrọ ịdepụta ndụmọdụ. Ụfọdụ ngalaba anyị maka ụlọ ọgwụ mgbu na -agụnye Ebe Eidsvoll Healthy Chiropractor Centre na Ọrịa anụ ahụ (Viken) na Lambertseter Chiropractor Center na Ahụike Ahụike (Oslo). Na anyị, ikike ọkachamara na onye ọrịa na -abụkarị ihe kacha mkpa.
Ụlọ ọgwụ anyị
(Lee nkọwa ebe a wee chọta ngalaba dị gị nso)
Peeji ọzọ: - Ihe I Kwesịrị Knowmara Banyere Osteoarthritis nke Hips
Kirie ihe onyonyo a ma ọ bụ njikọ dị n’elu gaa n’ihu peeji.
Nwere onwe gị ị soro anyị na Social Media
- Biko soro Vondt.net na ỊTUBE
(Soro ma kwuo ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka anyị mee vidiyo nwere mmega ma ọ bụ nkọwa zuru oke maka okwu gị kpọmkwem)
- Biko soro Vondt.net na Facebook
(Anyị na-agba mbọ ịzaghachi ozi niile na ajụjụ niile n'ime awa iri abụọ na anọ. Anyị nwekwara ike inyere gị aka ịgwa gị mmega ahụ ziri ezi maka nsogbu gị, nyere gị aka ịchọta ndị na-enye ọgwụgwọ, kọwaa azịza MRI na nsogbu ndị yiri ya.
Isi mmalite na nyocha:
1. Rompe et al, 2010. Obere ume ike extracorporeal shock wave therapy dị ka ọgwụgwọ maka medial tibial stress syndrome. Am J Egwuregwu Med. 2010 Jan; 38 (1): 125-32.
Foto: Wikimedia Commons 2.0, Creative Commons, Freestockphotos na ntinye aka onye na-agụ ya.
https://www.vondt.net/wp-content/uploads/Beinhinnebetennelse.jpg 400 650 ewute https://www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png ewute2016-11-30 10:23:302021-09-12 16:00:034 Ihe Omume Na-emegide Mgbu Ọrịa
4 Ihe omume megide akwara olu na azụ
07 / 06 / 2017 /0 Comments/i Akwara na Skeleton, Mmega Ahụ na Mmega Ahụ /av ewute
Stiff na azụ n'ụtụtụ? Ọ na-arụ ọrụ na akwara azụ?
Gbalịa ihe omume 4 ndị a nwere ike inyere gị aka ime ka ahụ erughị ala ma mee ka uru ahụ sikwuo gị ike. Enwere onwe gị ịkekọrịta enyi gị ma ọ bụ onye ezinụlọ gị nke akwara azụ azụ na -enye nsogbu. Imirikiti ndị mmadụ na -erite uru n'ịmụta mmega ahụ ụfọdụ maka akwara akwara na azụ.
Nke a bụ mmega ahụ 4 nwere ike ime ka akwara ike sie ike, dịkwuo mgbasa ọbara ma nye aka na-emekwu mmegharị na akwara na nkwonkwo. Akwara ike na akwara na azụ na-adịkarị. Omume ndị a nwere ike inyere gị aka belata mgbatị ahụ ike ị na-ewu n'ụbọchị.
Mgbatị ahụ ga-ekwekọ maka ahụike nke onwe gị. Ọgwụgwọ na dọkịta na-enye ikikere n'ihu ọha nwere ike ịdị mkpa yana ọzụzụ maka mgbake kachasị mma. Ihe omume anọ a nwere otu elekwasịrị anya na ịbawanye mmegharị na ịtọpụ eriri olu. Nwere onwe gị ịkpọtụrụ anyị na ibe Facebook anyị ma ọ bụrụ na i nwere ndenye ma ọ bụ kwuru.
Ndụmọdụ dị mma: vidiyo ọzụzụ na nha onwe
Pịgharịa n'okpuru maka ilele vidiyo ọzụzụ abụọ dị ukwuu nke nwere ike inyere gị aka ịtọghe akwara azụ azụ, meziwanye mgbasa ọbara na ibelata mgbu azụ. N'okpuru isiokwu a, ị nwekwara ike gụọ maka usoro nke onwe anyị akwadoro.
VIDI: Omume Ise Na-emegide Agaghị Mmetụta Na Nzụ N'ihi Ọkpụkpụ Akwara
Azụ na akwara ike na azụ nwere ike ibuta mgbakasị arụ ọrụ. Ọ bụrụ na iwe na-ewe ya iwe, nke a nwere ike ime ka akwara ndị ahụ dịkwuo nkọ ma na-egbu mgbu. Ndị a bụ usoro mmega ahụ ise dị iche iche nwere ike inyere gị aka ịtọghe azụ na azụ na iwe akwara.
Sonye na ezinulo anyị ma tinye aka na ọwa YouTube anyị maka ndụmọdụ mmega ahụ n'efu, mmemme mmega ahụ na ihe ọmụma ahụike. Mmadụ Bịa!
VIDI: Mgbatị Ise Ise Na-emegide Nsogbu Ọnọdụ Ọnọdụ Spine (Spinal Stenosis)
Oghere dị n’etiti spain bụ nke a maara dị ka spinal stenosis. Ọnọdụ akwara ndị a siri ike nwere ike ibuta mgbakasị ahụ na mgbagha akwara nke nwere ike ibute radieshon na ọnya n'ụkwụ, yana akwara azụ. Pịa n'okpuru ka ị hụ ihe omume ise dị gbatị ga - enyere gị aka ịgagharị agagharị na uru akwara ike.
Vidio ahụ ọ̀ tọrọ gị ụtọ? Ọ bụrụ na i jiri ha mee ihe, anyị ga-ekele gị maka ịdenye aha maka ọwa YouTube anyị ma nye anyị ntuli aka na mgbasa ozi mgbasa ozi. Ọ pụtara ọtụtụ ihe nye anyị. Nnukwu ekele!
Gụọ kwa: - Ihe I Kwesịrị Knowmara Banyere Mgbu Mgbu
Na mgbakwunye na mmega ndị a, anyị na-atụ aro ka ị gbanwee mmegharị gị kwa ụbọchị, dịka ọmụmaatụ n'ụdị obere ọrụ static, obere ibu ọrụ ugboro ugboro (ma eleghị anya ị nwere ike ịme mgbanwe na ọrụ?), Ahịa na-agagharị n'okirikiri ike ma ọ bụ igwu mmiri n'ọdọ mmiri na-ekpo ọkụ. Ọ bụrụ n’inwelarị nchoputa a nwapụtara, anyị na-atụ aro ka ị nyochaa dọkịta gị (dibịa, chiropractor, physiotherapist ma ọ bụ ihe yiri ya) ma mmega ndị a kwesịrị gị.
1. Easy side mobilization (ikpere ala)
Mgbatị ahụ na-agbakọ azụ ma na-agbatị akwara dị nso. Ekwesịrị iji nlezianya na nkwụsi ike na-emegharị mmegharị.
Malite Onodu: Iegha ụgha na azụ gị - ọkacha mma na akwa ịnara ọzụzụ na ohiri isi maka ebe a na-anọdụ ala. Debe ogwe aka gị aka nri n’akụkụ wee dọpụ ụkwụ gị abụọ bịakwute gị. Gbalịa mee ka ahụ gị dị elu ka ị na-emega ahụ.
egbu: Mee ka ikpere gị daa nwayọ site n'otu akụkụ gaa n'akụkụ mgbe ị na-edebe pelvis gị n'ụzọ nkịtị - jide n'aka na ejikọtara ubu abụọ ahụ na ala. Jiri mmeghari nwayọ jiri nwayọ ma jide ọnọdụ ahụ ihe dịka 5-10 sekọnd tupu ị jiri nwayọ gaa n'akụkụ nke ọzọ.
2. gha ụgha n’oche na ala ala
Omume a na-agbatị ahụ mgbu na piriformis - nke ikpeazụ bụ akwara nke na-etinyekarị na sciatica na sciatica. Dina n’elu ala, gbadaa azụ, ọkacha mma n’elu akwa mgbatị ahụ ma kwado ya n’olu. Mgbe ahụ gbagọọ ụkwụ aka nri ma tụkwasị ya n'apata ụkwụ aka ekpe. Mgbe ahụ jidere apata ụkwụ aka ekpe ma ọ bụ ụkwụ aka nri ma jiri nwayọ dọrọ n'ebe ị nọ ruo mgbe ị chere na ọ gbatịrị miri emi n'azụ apata ụkwụ na akwara obi ụtọ n'akụkụ ị na-agbatị. Jide nje ahụ maka 30 sekọnd. Ekem megharịa n'akụkụ nke ọzọ. Emechara ihe karịrị 2-3 n’otu akụkụ.
Nọdụ azụ azụ azụ (ịgbatị azụ ala, piriformis na oche)
Nọdụ ala oche eji arụ ọrụ ma ọ bụ yie ndị nwere ezigbo ọmarịcha na ala azụ (ọ gaghị ehulata). Debe otu ụkwụ n’elu nke ọzọ ma gbaghaa anụ ahụ n'akụkụ nke ọzọ - ị ga - eche na ọ na-agbatị nke ọma n'akụkụ oche ahụ na-eche ihu n'apata ụkwụ. Mgbatị na -emewanye mgbanwe na akwara a nwere ike belata nrụgide na azụ azụ ma si otu a na - enyere aka belata isi ike nke ukwu. Jide mmega ahụ maka sekọnd 30 wee kwugharịa na akụkụ abụọ ahụ atọ.
4. exercisegbatịgharị ahụ maka azụ azụ nke eriri ụfụfụ
Igwe na-agba ụfụfụ nwere ike ịbụ ezigbo ngwaọrụ maka ịtọghe ntakịrị n'etiti ubu ubu na azụ elu. A nwekwara ike iji ya gbatịa akwara gị - dị ka mgbatị ahụ nke na-agbatị nke ọma na akwara obi / pectoralis.
Nke a bụ otu esi eme mmega ahụ: Dina larịị na rolle ụfụfụ ka ị nwee nkwado maka olu na azụ gị. Biko mara na nke a na -arụ ọrụ naanị na rollers buru ibu nwere ogologo 90 cm ma ọ bụ karịa. Mgbe ahụ gbatịa aka gị nwayọ n'akụkụ wee bulie ha elu ruo mgbe ọ dị gị ka ọ gbatịkwuru akwara akwara. Jide ọnọdụ maka 30 - 60 sekọnd wee zuru ike. Tinyegharịa usoro 3-4.
Lee ihe omume 4 maka mgbatị anụ ahụ n'azụ. Azụ na ahụ na - eme ka uru ahụ dịkarịsịrị iche, mana ọ na - eweta nsogbu. Omume ndị a nwere ike inyere gị aka belata nsogbu ahụ ma mee ka ị na - emegharị ahụ. Ọzụzụ a kwesịrị ka ahaziri onye ọ bụla.
Kedu ihe m ga -eme onwe m megide akwara akwara na ahụ erughị ala na azụ?
Nke a bụ ajụjụ anyị na -enweta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa ụbọchị ụlọ ọgwụ anyị. Nke mbụ, ọ dị mkpa ịkọwapụta na ụfọdụ usoro ga -adịrị ụfọdụ mma karịa ndị ọzọ. Ya mere, anyị ahọrọla ilekwasị anya na ndụmọdụ n'ozuzu ebe a. Ihe na -ebutekarị isi ike na esemokwu na azụ bụ n'ihi oke ibu static, obere mgbasa na oke mkpakọ megide ala azụ. Ọ bụrụ na anyị ewere nke a dị ka mmalite, anyị chọrọ inye ndụmọdụ ndị a - yana, dịka ekwuru, nke a bụ ndụmọdụ anyị na -enye kwa ụbọchị na ọnọdụ ụlọ ọgwụ.
Ndụmọdụ 1: Movement
More ije na ndụ kwa ụbọchị. Ị nụla ya mbụ - ugbu a ị nụla ya ọzọ. Tinye akpa ndị nwere ọtụtụ mmegharị na mmegharị na ndụ gị kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na mgbu na -egbochi gị ime ihe na mgbatị ahụ, gakwuru onye dibịa nwere ikikere maka enyemaka.
Atụmatụ 2: Ịkpalite ebe bọọlụ
Ha enweghị ike dochie ọrụ akwara site na physiotherapist ma ọ bụ chiropractor nke oge a, mana ha abụghịkwa ndị nzuzu. Site n'iji otu akpalite na mgbe bọọlụ (lee ọmụmaatụ ebe a na nhọrọ ịzụrụ - mepee na windo ọhụrụ) ụbọchị ọ bụla ọzọ - cheta ụbọchị ezumike n'etiti nnọkọ - ị nwere ike kpalite mgbasawanye na mpaghara nwere anụ ahụ dị nro na anụ ahụ akwara.
Ndụmọdụ 3: Ọnọdụ ịnọdụ ala dị iche iche na Ergonomic nke Coccyx
Ọrụ gị ọ na -agụnye ọtụtụ ịnọdụ n'ihu PC (maka ọnụ ọgụgụ anyị dị ịtụnanya)? Ọ bụ na ị naghị enwe mmasị na imefu puku kwuru puku puku iri n'oche oche ergonomic dị oke ọnụ ahịa? Mgbe ahụ onye nwere ike nkwusioru ọdụdụ ergonomic (lee ihe atụ site na njikọ ebe a) bụrụ ezigbo azịza. Anyị ji ọlyụ na -atụ aro ka ị gbanwee ọnọdụ ịnọdụ ala ụbọchị dum mgbe ị na -eji ohiri isi a. Ọla edo bara uru n'ihi na ọ na -agbanwe ebe azụ ị na -ebu ibu mgbe ịnọ. Gbanwee ugboro ugboro iji mụbaa mgbanwe na azụ. Enwere ike iji otu echiche ahụ nye gị ndị nsogbu na eziokwu ahụghị na ị hụghị ezigbo ọnọdụ ihi ụra, mana na nke a Ohiri isi pelvic dabara nke ọma (lee ihe atụ site na njikọ ebe a).
Alala azụ ịkpọtụrụ anyị na YouTube ma ọ bụ Facebook ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ gbasara mgbatị ahụ ma ọ bụ nsogbu akwara na nkwonkwo gị. Ị nwekwara ike ịhụ nchịkọta nke ụlọọgwụ anyị site na njikọ ebe a ọ bụrụ na ịchọrọ ịdepụta ndụmọdụ. Ụfọdụ ngalaba anyị maka ụlọ ọgwụ mgbu na -agụnye Ebe Eidsvoll Healthy Chiropractor Centre na Ọrịa anụ ahụ (Viken) na Lambertseter Chiropractor Center na Ahụike Ahụike (Oslo). Na anyị, ikike ọkachamara na onye ọrịa na -abụkarị ihe kacha mkpa.
Peeji ọzọ: Ihe I Kwesịrị Knowmara Banyere Ọkpụkpụ nke Olu
Kirie ihe onyonyo nke dị n’elu gaa n’ihu peeji nke na-esote.
Ọzọkwa gụ: - AU! O bu Mbubre Mbubreyo ma obu Nmechu Anya? (Youmaara na ha abụọ nwere ọgwụgwọ abụọ n'ụzọ dịgasị nnọọ iche?)
Ọzọkwa gụ: - 8 ezigbo ndụmọdụ na usoro megide sciatica na sciatica
(Anyị na-agba mbọ ịzaghachi ozi niile na ajụjụ niile n'ime awa iri anọ na anọ ruo iri anọ na anọ)
https://www.vondt.net/wp-content/uploads/ryggstrekking.jpg 468 625 ewute https://www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png ewute2017-06-07 21:34:152021-09-12 15:03:274 Ihe omume megide akwara olu na azụ
Peeji nke 1 nke 34123>»